WordPress: Jetpack ကိုယခု Install လုပ်ရန်အကြောင်း (၃) ချက်! | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 4, 2013 ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 9, 2015 Douglas Karr
မနေ့ညကငါ on ည့်သည်ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တယ် Twitter chat #atomicchat မှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရှေးရှေးအားဖြင့် run အနုမြူရောက်ရှိခြင်း။ ကျွန်တော် WordPress အတွက်ကောင်းတဲ့ plugins တွေအကြောင်းကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ပြောရရင် plugin တစ်ခုအကြောင်းဆွေးနွေးနေတာပါ Jetpack.
Jetpack သည်သင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင် WordPress ဆိုဒ်ကို WordPress.com ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အားသွင်းသည်။
သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Jetpack WordPress ဆိုက်အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိသော်လည်းအဓိကအချက်သုံးချက်မှာကျွန်ုပ်အတွက်ထင်ရှားသည်။
သင်၏ site ကိုလက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့်ကောင်းစွာဖတ်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိပါကသင်၏ visitors ည့်သည်များသည်များစွာသောအားဖြင့်သင့်ကိုငွေညှစ်ကြသည်။ သတင်းကောင်းတစ်ခုမှာသင်တုန့်ပြန်သောဆောင်ပုဒ်အသစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်မိုဘိုင်း add-on တစ်ခုတွင်ငွေတစ်တန်မျှမသုံးစွဲရန်လိုအပ်သည်။ WordPress ကသင့်အားကောင်းမွန်သောပေါ့ပါးသည့်မိုဘိုင်းဆောင်ပုဒ်တစ်ခုဖြင့်ဖုံးကွယ် ထား၍ မရသောစိတ်ကူးများကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တွင်တိုင်ကြားချက်ရှိပါက၊ ထိုအခင်းအကျင်းကိုအခင်းအကျင်းလမ်းညွှန်တွင်အမှန်တကယ်သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိသောကြောင့်သင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ပါက plugin ကိုမွမ်းမံခြင်းသည်၎င်းတို့ကိုရှင်းပစ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင် iTunes ကဲ့သို့မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများသည်ဆိုဒ်အက်ပလီကေးရှင်းအတွက်တပ်ဆင်ခလုတ်တစ်ခုပေါ်လာသည့် meta data ကိုပေးသည်။ ဒီပလပ်အင်အတွက်အလွန်ကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ပါလိမ့်မယ်။
On Martech Zoneကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးအစားများအပေါ် အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်ရန်တက်ကြွစွာတောင်းဆိုမှုများရှိသည်။ သင်သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပါကလူမှုရေးမီဒီယာခေါ်ဆိုမှုကိုဘေးဘက်ရှိကမကထပြုသူထံမှပြသမည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သော်လည်းကိုယ်ပိုင် plugin ကိုပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ မဟုတ်တော့ပါဘူး! Jetpack တစ်ဦးနှင့်အတူကြွလာ မြင်နိုင်စွမ်း တိကျသောဝစ်ဂျက်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ပြသမည်ကိုရှုပ်ထွေးသောစည်းမျဉ်းများချမှတ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ရွေးစရာ။
သင်၏အကြောင်းအရာကိုလူမှုရေးမြှင့်တင်ခြင်းသည်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမဟုတ်တော့ပါ။ ၎င်းသည်အလုံးစုံမဟာဗျူဟာတွင်အရေးကြီးသည်။ သင်၏လူမှုကွန်ယက်များတစ်လျှောက်တွင်သင်၏တင်ပို့ချက်များကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်လွှင့်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် WordPress သည်ဤစိန်ခေါ်မှုကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ဂူးဂဲလ် + ထည့်သွင်းရန်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်နေပြီး၎င်းသည်ထည့်သွင်းလိုက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်ကိုဤပလပ်အင်သို့ပြောင်းလဲနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိတွင်အသုံးပြုသည် Buffer သို့ WordPress ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်များကိုမျှဝေရန်ပလပ်အင်နှင့်ကြားခံ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အရေးအကြီးဆုံး Jetpack ၎င်းသည်၎င်းသည် WordPress အတွက်ဇာတိဖြစ်ပြီး WordPress တီထွင်သူများကတည်ဆောက်သည်။ စျေးကွက်တွင်ပလပ်ဂင်များစွာ၏အရည်အသွေးကိုကြည့်ရှု။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောရင်းမြစ်တစ်ခုရရှိရန်စိတ်ကူးနေသည်။ ထည့်သွင်းပါ Jetpack ယခုဤအင်္ဂါရပ်များနှင့်များစွာသော, များစွာသောပိုပြီး၏အားသာချက်ကိုယူ!
Tags: ပြောင်းလဲနေသောဝစ်ဂျက်မိုဘိုင်းဆောင်ပုဒ်statsမြင်နိုင်စွမ်းဝစ်ဂျက်wordpress plugin ကို